आखिर कस्को प्यारमा दिवानी भइन् मनिषा ? (भिडियो सहित) - Radio Tharuhat Your browser does not support the audio element.
थारु समुदायको गुरही पर्वको अवसरमा सुलभ फिल्मस् एण्ड स्टुडियो धनगढीले नयाँ म्युजिक भिडियो ‘दिवाना होगिनु’ बजारमा ल्याएको छ ।
गायक रामकुमार कठरियाको शब्द संगीत रहेको गीतमा गायक कठरिया र स्वस्तिका चौधरीको स्वर रहेको छ । सुलभ फिल्मस् एण्ड स्टुडियोको प्रस्तुतीमा रहेको म्युजिक भिडियोमा धनीराम चौधरी र मनिषा रावलको अभिनय गरेका छन् ।
म्यजिक भिडियोलाई मुन्ना लभकुश्मीले डारेक्सन गरेका छन् भने कोरियोग्राफर आदर्श महतोले गरेका छन् । छायांकनमा दयाशंकर चौधरी, ड्रोनमा सतिश सिन्हा, असिस्टेन्ट क्यामेरामेन महेश चौधरी र मेकअपमा हसिना राना रहेकी छिन् । म्युजिक भिडियो कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ६ खरेट्टी स्थित अत्यन्त रमणीय एवं पर्यटकीय स्थल जुगनिया ताल परिसर र होमस्टे थारु गाउँ भादामा छायांकन गरिएको छ ।
त्यसैगरि सुलभ फिल्मस् एण्ड स्टुडियोको प्रस्तुतीमा नै ‘घोडाघोडी मन्दिरमा’ बोलको म्युजिक भिडियो पनि सावन १ गते बजारमा आइसेको छ । म्युजिक भिडियोमा छल्लु दादा, सुमित्रा चौधरी लगायतका कलाकार रहेका छन् ।
Previous Postअनु चाैधरी काे जादुमयी स्वर
Next Post“पगली” कना थारु म्युजिक भिडियो सार्वजनिक —